Ọ bụ Nnụnụ... Ọ bụ ụgbọ elu... Ọ bụ Seoul Air Taxi ọhụrụ!
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ South Korea na -agbasa » Ọ bụ nnụnụ… Ọ bụ ụgbọ elu… Ọ bụ Seoul Air Taxi ọhụrụ!
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Akụkọ South Korea na -agbasa • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ọ bụ nnụnụ… Ọ bụ ụgbọ elu… Ọ bụ Seoul Air Taxi ọhụrụ!
A na-atụ anya na usoro tagzi ụgbọ elu ọhụrụ ahụ ga-ebelata mkpọchi okporo ụzọ na isi obodo South Korea wee malite ịrụ ọrụ n'afọ 2025.
Ụgbọ elu tagzi ọhụrụ mere ụgbọ elu nnwale na ọdụ ụgbọ elu Gimpo nke Seoul.
A na-ahazi ụgbọ elu nnwale nke ọha maka izu na-abịa n'ọdụ ụgbọ elu Incheon nke Seoul.
South Korea n'afọ gara aga kwupụtara atụmatụ ịzụlite akụrụngwa UAM nke mba, na-etinye ihe dị ka nde $ 65 na teknụzụ.
Ụgbọ elu 18-rotor nke ụlọ ọrụ German mere Volocopter mere ụgbọ elu nnwale dị mkpirikpi na ọdụ ụgbọ elu Gimpo nke Seoul na Tọzdee.
A na-eduzi ụgbọ elu nnwale nke ụgbọ elu pụrụ iche e mere ka ọ rụọ ọrụ dị ka tagzi ikuku n'ọdịnihu dị nso ka onye na-anya ụgbọelu na-ebuga ya n'ikuku ma na-efegharị ya azụ na azụ n'ime ụzọ ikuku ahaziri.
A na-atụ anya na usoro tagzi ikuku ọhụrụ ga-ebelata mkpọchi okporo ụzọ na South Koreaisi obodo wee rụọ ọrụ site na 2025.
Ụgbọ elu ụgbọ elu nke ime obodo (UAM) kpuchiri ihe dị ka kilomita 3, na-anọ n'okpuru elu nke mita 50 ma rute ọsọ nke 45kph n'oge ụgbọ elu nnwale nke nkeji ise.
Ebumnuche bụ isi nke ule a bụ ịhụ ka ngalaba ahụ si arụ ọrụ na gburugburu ọdụ ụgbọ elu, ebe njikwa ụgbọ elu dị mkpa maka ịrụ ọrụ nchekwa.
Ihe nlereanya nke oche abụọ, nke na-eji moto eletrik na-arụ ọrụ 18 na-emepụta ihe na-emepụta ihe dị ka quadcopter drone, mere ụgbọ elu mbụ ya na 2013. A na-atụ anya ụgbọ elu ule ọha na eze na-eme n'izu na-abịa na Incheon, akụkụ ọdịda anyanwụ. nke Seoul Mpaghara isi obodo.
South Korea N'afọ gara aga kwupụtara atụmatụ ịzụlite akụrụngwa UAM mba, na-etinye ihe dị ka nde $ 65 na teknụzụ. Gọọmentị nwere olile anya ịgbasa tagzi ụgbọ elu site na 2025, na-ebugharị ndị njem solo n'etiti ọdụ ụgbọ elu International Incheon na Central Seoul na ọnụ ahịa ihe dị ka $ 93 kwa njem - dị elu karịa tagzi adịchaghị. A na-atụ anya na mkpado ọnụahịa ahụ ga-agbada karịa okpukpu ise ka ọ na-erule 2035, mgbe a na-anabata UAM ngwa ngwa yana sistemu akpaghị aka na-anya ya karịa mmadụ.
Otú ọ dị, Volocopter ga na-eche asọmpi sitere na UAM ụlọ a na-akpọ OPPAV. Onye nrụpụta ya, Korea Aerospace Research Institute (KARI), na-akwado ime ụgbọ elu nnwale zuru oke n'afọ ọzọ.